Fiidiyowga Muhiimka ah ee Tilmaamayaasha B2B | Martech Zone
Tirakoobka Muhiimka ah ee Fiidiyowga ee Buuqlayaasha B2B
Tani waxay noqon kartaa tan ugu madadaalada iyo dheelitirka fiidiyowga fiidiyowga ee aan daawaday Suuqgeynta B2B. In kasta oo tirakoobka la uruurinayey sanad ka hor, haddana wuxuu sawir aad u cad ka bixinayaa sida dabeecadaha wax iibsigu waxay ganacsiga u beddeleen ganacsi. Waxay sidoo kale bixisaa tiro caddayn ah oo ku saabsan sida iyo sababta nuxurka iyo istiraatiijiyadda bulshada ay muhiim ugu yihiin suuqgeynta B2B!
Qaabka ay ganacsatadu wax u iibsaneyso ayaa waxoogaa ka sii adkaanaya, marka waxaan weydiinnay su'aal: 'Tani ma dhammaadkii ololihii bannaanka loo soo baxay?' Hagaag, fiidiyowgeena dabagalka ah ayaa lagu soo koobay dhammaan xaqiiqooyinka iyo tirooyinka loogu talagalay suuqleyda si ay u dhisaan kiis ganacsi oo loogu talagalay istiraatiijiyadda suuq geynta iyo dibedda ee isku dheelitiran. Waxay xitaa soo bandhigtay dinosaurs. Gardaro
Mawduuca muhiimka ah ee fiidiyowgaan oo dhan si toos ah ayuu toos ugu socdaa… ku wargeli rajadaada, ha ka iibin iyaga. Awoodda samaynta iibku aad ayey u fududahay markii rajadaadu waxbarto - maahan oo keliya sheygaaga - laakiin khibraddaada iyo awoodda aad ku dhex leedahay warshadaha.
Waa kuwan la socda B2B Xogta Tirakoobka muhiimka ah:
Tags: kharashka helitaankasuuq geynta b2bsuuq geynta b2bsuuq geynta b2bContent Suuqhelitaanka macaamiishaku soo noqo maalgashigaakhriska warqad cadwhitepapers
Fiiri, Raadraac oo Hagaaji Qiimeynta App-kaaga Mobilada